Fanesorana dinamoy bisikileta - Ikkaro
firosoana >> Fanodinana vilany elektronika sy mekanika >> Fanesorana dinamoy amin'ny bisikileta
Sitrana aho a dinamo taloha tsy mandeha izany. ny Dinamo Is a Generator elektrika manova ny angovo mekanika ho lasa herinaratra mivantana.
Hitanay ireo faritra samihafa izay anaovana ny dinamo.
Fanodina, ilay ampahany mihetsika, atosiky ny kodiaran'ny bisikileta, dia andriamby misy endrika toroidal mihetsika ao anatiny stator, izay ilay ampahany raikitra, noforonin'ny rafitra metaly ary nifandray tamin'ny coil an'ny faritra ambany.
Tsy afaka nanokatra azy aho raha tsy namaky ny plastika nanodidina azy, fa raha vao manokatra azy aho dia toa harafesina tanteraka.
Ny hevitro dia ny fanadiovana ny harafesina amin'ny rafitra stator miaraka amin'i Salfumán.
Fa azonao atao ve ny mieritreritra hevitra hafa hampandeha azy?
Fampahalalana bebe kokoa momba ny dinamo.
Dynamo amin'ny wikipedia
Teknolojia ao anaty atody tsara fanahy kokoa
3 hevitra momba ny "famongorana dinamozy amin'ny bisikileta"
8 martsa 2014 amin'ny 11:20 maraina
Nanao ahoana ny fanandramana? Nahazoanao miasa ve io? Mirary ny soa indrindra.
4 Jona 2014 amin'ny 3:49 hariva
Manana dynamo tavoahangy aho ary niasa nandritra ny telo volana teo (nandritra ny fotoana farany) tamin'ny dia kilometatra 136 izay nataoko tamin'ny raiko, ny reniko ary ny zandriko vavy. Amin'ity fitsidihana ity angamba ny ampahefatry ny dia nampiasako azy. Ary androany te-hampiasa azy io indray aho dia tsy manome hazavana intsony. Efa nojereko ny jiro. Efa nojereko ireo tariby. Ary milamina ny zava-drehetra raha tsy misy arus avy amin'ny dinamo mankany amin'ny jiro. Te hamelombelona azy aho satria tsy misy dinamo toy izany eto amin'ny fireneko. Dinamo 12-volt izy io izay mahatonga ny fanairana fanairana vonjy maika ho ahy (sirene… Tsy fampiasako ny kiririoka akory satria mihetsika tsara isika). Ny vaovao hitako tato dia nanampy ahy hahalala kely momba ny dynamo, saingy tiako ny manamboatra azy… Afaka manampy ahy ve ianao? Azonao omena ahy ve ny fampahalalana hahafantarako izay faritra tokony hizahako maso sy fizahana madio? miasa indray amin'ny bisikiletako ... ary raha misy motera hafa azoko ampiasaina hananana an'io herinaratra io na avo kokoa (hatramin'ny roa-polo volts) mba hahitako ny fomba fanamboarako boaty hamoriana azy ary hametahana azy amin'ny bisikiletako. ...
Hankasitrahako ireo fampahalalana sy torolalana azonao omena ahy. Azonao atao ihany koa ny mandefa ny fampahalalana amiko: Chamo.Hackert@gmail.com; EACh.Ortiz@gmail.com; EACh.Ortiz@hotmail.com
Misaotra mialoha ho an'ny fanampiana rehetra azonao omena ahy ... sy ny fiheverana ny fiahiahiako sy ny filako. MISAOTRA ANAO.
10 Aogositra 2018 amin'ny 5:54 hariva
Ilaina ny manamarika lesoka fahita mahazatra ho an'ny mpankafy ary izany dia ny ankehitriny izay avy amin'ny dinamo dia TSY MITOHY IZAO. Raha ny tena izy dia tsy fantatra anarana hoe DYNAMO izy io satria tsy maintsy antsoina hoe ALTERNATOR.-